အရာရာတိုင်းကို မြန်ဆန်စွာလေ့လာနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းများ – Gentleman Magazine
အရာရာတိုင်းကို မြန်ဆန်စွာလေ့လာနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းများ
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိတဲ့အချိန်ထက် ပိုတဲ့အရာတွေကို လေ့လာချင်ကြပါတယ်။ အင်တာနက်ခေတ်လဲ ရောက်လာတော့ ပိုဆိုးသွားတာပေါ့။ အရာများများ လေ့လာနိုင်ဖို့ဆိုရင် မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ လေ့လာပြီးဖို့က တစ်ခုထဲသော နည်းလမ်းပါ။
ဒီဆောင်းပါးမှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေ့လာနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအရာတွေကို ပြောပြသွားမှာပါ။
လေ့လာတယ်ဆိုတာမှာ ဘာသာစကားတွေ၊ စီးပွားရေးစွမ်းရည်တွေ၊ ဂီတ ပစ္စည်းတွေ၊ အရာအားလုံး ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလို အရာအားလုံးကို လေ့လာရာမှာ မြန်ဆန်အောင် အသုံးချနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့
၁. ဘီးကို ပြန်မထွင်ပါနဲ့
ထွင်ပြီးသား ဘီးကို ဘာကြောင့် ပြန်တီထွင်ရမှာလဲ?? လေ့လာရာမှာ လူတွေ အမှတ်မှားနေတဲ့ အရာတစ်ခုကတော့ အဲဒီအရာကို တစ်ယောက်ထဲ အခြေခံကစပြီး ဆရာတစ်ဆူဖြစ်အောင် လေ့လာချင်တာပါ။ သင် တစ်ခုခုကို စသင်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကို ပြန်စဉ်းစားပါ။ အဲဒီက ကြုံခဲ့ရတဲ့ အမှားတွေ၊ အခက်အခဲတွေ ကို ပြန်သတိရပါ။ အခု သင့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အဲဒီပညာကို သင်ချင်တယ်ဆိုရင် သင်ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ မတွေ့အောင် သင် လမ်းပြမပေးနိုင်ပေဘူးလား။ ပညာတစ်ခုခုရချင်ရင် အဲဒီပညာမှာ ဆရာအဆင့် ရှိတဲ့သူတွေထံ သွားရောက်ပြီး နည်းလမ်းခံယူကာ သူတို့ခင်းပေးတဲ့ လမ်းကို လျှောက်ရုံပါပဲ။
၂. စွမ်းရည်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပစ်ပါ
စွမ်းရည်တစ်ခုကို လေ့လာဖို့ အလွယ်ဆုံးကတော့ အဲဒီ စွမ်းရည်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပစ်ပြီး အရေးကြီးဆုံး အပိုင်းတွေက စလေ့လာတာပါပဲ။ အရေးကြီးဆံ အပိုင်းကို သိဖို့ ၂၀/၈၀ နိယာမကို သိထားပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဖောက်သည် ၂၀ ရာနှုန်းက အမြတ် ၈၀ ရာနှုန်းကို သယ်လာပါတယ်။ အဲဒီ ၂၀ ရာနှုန်းကို အရင်လေ့လာပါ။
ကျွန်တော်တို့ အလုပ်တစ်ခုကို အမြန်ဆုံး လေ့လာသဘောပေါက်မိဖို့ နာရီ ၁သောင်း မလိုပါဘူး။ ပထမ နာရီ ၂၀ ကိုသုံးပြီး အလုပ်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကာ အရေးကြီးဆုံး အလုပ်လေးတွေကို သေချာလေ့လာလိုက်တာဟာ အချိန်နဲ့စာရင် အကြီးမားဆုံး အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရပါတယ်။
၃. အလုပ် နှစ်ခွ မလုပ်ပါနဲ့
အလုပ် လုပ်နေရင်း Facebook message လေး ဝင်လာတာ ကို ဖတ်ကြည့်တာ၊ Email လေး စစ်တာ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကို နှုတ်ဆက်ရတာ အားလုံးဟာ သင့်အာရုံကို နှစ်ခွ ဖြစ်စေပါတယ်။ အာရုံနှစ်ခွနဲ့ အလုပ်နှစ်ခု လုပ်တာဟာ လေ့လာမှုရဲ့ အကြီးမားဆုံး အဟန့်အတားပါ။ သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာတောင် App ပေါင်း ၂၀ လောက် ဖွင့်ထားရင် ဟန်းသွားမှာပါ။ လူတစ်ယောက်ဟာ စိတ်အာရုံစူးစိုက်မှု နှောက်ယှက်ခံလိုက်ရရင် နဂိုအခြေအနေပြန်ရောက်ဖို့ ၂၅ မိနစ် ကြာပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကာလရှည် လေ့လာမှုတွေမှာလဲ အဲဒီလိုပါပဲ။ တစ်ခုကို လေ့လာရင် နောက်အရာတွေကို မေ့ထားပါ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး အရေးပါဆုံး နေရာတွေကို သင်ယူနေတုန်းဆိုရင် ဘာအနှောင့်အယှက်မှ မလာပါစေနဲ့။
၄. ထပ်ခါ ထပ်ခါ ထပ်ခါ လုပ်ပါ
ဒီနေရာဟာ လူတော်တော်များများ ရုန်းကန်ရတဲ့ နေရာပါပဲ။ လေ့လာခြင်းမှာ လေ့ကျင့်ခြင်းက အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ တော်တော်များများ မကြားလိုကြပါဘူး။ လေ့ကျင့်ရာမှာ အလုပ်စွမ်းရည်တစ်ခုကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ လုပ်ပြီး နောက်ဆုံး လုပ်နေမှန်း မသိပဲနဲ့ အလိုလို လုပ်ပြီးသွားတဲ့ အခြေအနေမျိုးထိ ကျင့်ရမှာပါ။ ဒီအဆင့်ကို တောင့်ခံနိုင်သူကတော့ ဆရာတစ်ဆူ ဖြစ်မှာပါပဲ။ ဆရာ အဆင့် ကျွမ်းကျင်မှုဟာ ဆရာအဆင့် လေ့ကျင့်မှုကြောင့်ပါ။ မွေးရာပါ မဟုတ်ပါဘူး။
၅. ဝေဖန်မှု ချက်ခြင်း ခံယူပါ
၁၉၆၀ Highschool Rock band လေး တစ်ခု ဘဝမှာကတည်းက Beatles ဟာ ဂျာမနီမှာ သွားရောက် ပြီး လမ်းဘေးတီးဝိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဖြေဖျော်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာမှ မရခဲ့ပါဘူး။ အသံတွေကလဲ ဆိုးရွားလွန်းခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ ဘာရခဲ့လဲ?? လေ့ကျင့်မှုနဲ့ ဝေဖန်မှုတို့ပါ။ အဲဒါကပဲ Beatles ကို အပေါ်ကို တွန်းပို့ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကားဂိုထောင်ထဲမှာပဲ ကျင့်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ချက်ခြင်းဝေဖန်နိုင်မယ့် လူအုပ်ရှေ့မှာ ကျင့်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီလိုနဲ့ တစတစ ပိုကောင်းလာပြီး ၁၉၆၄ မှာ နိုင်ငံတကာအဆင့်ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ တီးဝိုင်းဟာ အကြိမ် ၁၂၀၀ ဖြေဖျော်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ခုခေတ် တီးဝိုင်း အားလုံးလိုလိုဟာ အကြိမ် ၁၀၀၀ မဖြေဖျော်နိုင်ပါဘူး။
၆. ကြာရှည်စွာ လေ့လာပါ
အောင်မြင်နိုင်တဲ့ လူတော်တော်များများဟာ မျောသွားတဲ့ အခြေအနေမှာ ဆက်လက် မလေ့လာကြတော့ပါဘူး။ တစ်ခုခု အသစ်အဆန်းကို တွေ့ကြုံရရင် လူဟာ အဲဒီအရာကို လုပ်ရတာ ရွှင်မြူးတက်ကြွတတ်ပါတယ်။ ရိုးသွားတဲ့ အချိန်ကျတော့ ပျင်းသွားပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆက်လက် မလေ့လာတော့ပါဘူး။ သင်ဟာ အရှေ့မှာ မျောသွားတော့မယ်ဆိုတာကို သိရင် ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ပြန်ထိန်းနိုင်ရပါမယ်။ သိနေရင်တော့ ထိန်းရ လွယ်နေမှာပါ။ အဲဒီ မျောတဲ့ အချိန် အဆုံးမှာ သင့်ဘဝ တိုးတက်လာတာ ခံစားရမှာပါ။
– တတ်ကျွမ်းပြီးသားလူတစ်ယောက်ရဲ့ နည်းနာကို ခံယူပါ
– စွမ်းရည်၊ အလုပ် တစ်ခုခုကို အသေးစိတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးမှ အရေးကြီးတာတွေကို ရွေးချယ်လေ့လာပါ
– အလုပ် နှစ်ခွ မလုပ်ပါနဲ့
– ထပ်ခါ ထပ်ခါ လုပ်ပါ
– ဝေဖန်မှု ချက်ခြင်း ခံယူပါ
– မပြီးဆုံးခင် မျောမသွားပါစေနဲ့။ မပျင်းပါနဲ့
အရာရာတိုငျးကို မွနျဆနျစှာလလေ့ာနိုငျဖို့ နညျးလမျးမြား
ကြှနျတျောတို့ဟာ ကြှနျတျောတို့မှာ ရှိတဲ့အခြိနျထကျ ပိုတဲ့အရာတှကေို လလေ့ာခငျြကွပါတယျ။ အငျတာနကျခတျေလဲ ရောကျလာတော့ ပိုဆိုးသှားတာပေါ့။ အရာမြားမြား လလေ့ာနိုငျဖို့ဆိုရငျ မွနျမွနျဆနျဆနျနဲ့ လလေ့ာပွီးဖို့က တဈခုထဲသော နညျးလမျးပါ။
ဒီဆောငျးပါးမှာ မွနျမွနျဆနျဆနျလလေ့ာနိုငျဖို့ လိုအပျတဲ့ အခွခေံအရာတှကေို ပွောပွသှားမှာပါ။
လလေ့ာတယျဆိုတာမှာ ဘာသာစကားတှေ၊ စီးပှားရေးစှမျးရညျတှေ၊ ဂီတ ပစ်စညျးတှေ၊ အရာအားလုံး ပါဝငျပါတယျ။ ဒီလို အရာအားလုံးကို လလေ့ာရာမှာ မွနျဆနျအောငျ အသုံးခနြိုငျတဲ့ နညျးလမျးတှကေတော့
၁. ဘီးကို ပွနျမထှငျပါနဲ့
ထှငျပွီးသား ဘီးကို ဘာကွောငျ့ ပွနျတီထှငျရမှာလဲ?? လလေ့ာရာမှာ လူတှေ အမှတျမှားနတေဲ့ အရာတဈခုကတော့ အဲဒီအရာကို တဈယောကျထဲ အခွခေံကစပွီး ဆရာတဈဆူဖွဈအောငျ လလေ့ာခငျြတာပါ။ သငျ တဈခုခုကို စသငျခဲ့တဲ့ အခြိနျကို ပွနျစဉျးစားပါ။ အဲဒီက ကွုံခဲ့ရတဲ့ အမှားတှေ၊ အခကျအခဲတှေ ကို ပွနျသတိရပါ။ အခု သငျ့သူငယျခငျြးတဈယောကျက အဲဒီပညာကို သငျခငျြတယျဆိုရငျ သငျကွုံရတဲ့ အခကျအခဲတှနေဲ့ မတှအေ့ောငျ သငျ လမျးပွမပေးနိုငျပဘေူးလား။ ပညာတဈခုခုရခငျြရငျ အဲဒီပညာမှာ ဆရာအဆငျ့ ရှိတဲ့သူတှထေံ သှားရောကျပွီး နညျးလမျးခံယူကာ သူတို့ခငျးပေးတဲ့ လမျးကို လြှောကျရုံပါပဲ။
၂. စှမျးရညျကို ခှဲခွမျးစိတျဖွာပဈပါ
စှမျးရညျတဈခုကို လလေ့ာဖို့ အလှယျဆုံးကတော့ အဲဒီ စှမျးရညျကို ခှဲခွမျးစိတျဖွာပဈပွီး အရေးကွီးဆုံး အပိုငျးတှကေ စလလေ့ာတာပါပဲ။ အရေးကွီးဆံ အပိုငျးကို သိဖို့ ၂၀/၈၀ နိယာမကို သိထားပါ။ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှမှော ဖောကျသညျ ၂၀ ရာနှုနျးက အမွတျ ၈၀ ရာနှုနျးကို သယျလာပါတယျ။ အဲဒီ ၂၀ ရာနှုနျးကို အရငျလလေ့ာပါ။
ကြှနျတျောတို့ အလုပျတဈခုကို အမွနျဆုံး လလေ့ာသဘောပေါကျမိဖို့ နာရီ ၁သောငျး မလိုပါဘူး။ ပထမ နာရီ ၂၀ ကိုသုံးပွီး အလုပျကို ခှဲခွမျးစိတျဖွာကာ အရေးကွီးဆုံး အလုပျလေးတှကေို သခြောလလေ့ာလိုကျတာဟာ အခြိနျနဲ့စာရငျ အကွီးမားဆုံး အကြိုးသကျရောကျမှုကို ရပါတယျ။
၃. အလုပျ နှဈခှ မလုပျပါနဲ့
အလုပျ လုပျနရေငျး Facebook message လေး ဝငျလာတာ ကို ဖတျကွညျ့တာ၊ Email လေး စဈတာ၊ လုပျဖျောကိုငျဘကျတှကေို နှုတျဆကျရတာ အားလုံးဟာ သငျ့အာရုံကို နှဈခှ ဖွဈစပေါတယျ။ အာရုံနှဈခှနဲ့ အလုပျနှဈခု လုပျတာဟာ လလေ့ာမှုရဲ့ အကွီးမားဆုံး အဟနျ့အတားပါ။ သငျ့ရဲ့ ကှနျပြူတာတောငျ App ပေါငျး ၂၀ လောကျ ဖှငျ့ထားရငျ ဟနျးသှားမှာပါ။ လူတဈယောကျဟာ စိတျအာရုံစူးစိုကျမှု နှောကျယှကျခံလိုကျရရငျ နဂိုအခွအေနပွေနျရောကျဖို့ ၂၅ မိနဈ ကွာပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ ကာလရှညျ လလေ့ာမှုတှမှောလဲ အဲဒီလိုပါပဲ။ တဈခုကို လလေ့ာရငျ နောကျအရာတှကေို မထေ့ားပါ။ ခှဲခွမျးစိတျဖွာပွီး အရေးပါဆုံး နရောတှကေို သငျယူနတေုနျးဆိုရငျ ဘာအနှောငျ့အယှကျမှ မလာပါစနေဲ့။
၄. ထပျခါ ထပျခါ ထပျခါ လုပျပါ
ဒီနရောဟာ လူတျောတျောမြားမြား ရုနျးကနျရတဲ့ နရောပါပဲ။ လလေ့ာခွငျးမှာ လကေ့ငျြ့ခွငျးက အရေးကွီးတယျဆိုတာ တျောတျောမြားမြား မကွားလိုကွပါဘူး။ လကေ့ငျြ့ရာမှာ အလုပျစှမျးရညျတဈခုကို ထပျခါ ထပျခါ လုပျပွီး နောကျဆုံး လုပျနမှေနျး မသိပဲနဲ့ အလိုလို လုပျပွီးသှားတဲ့ အခွအေနမြေိုးထိ ကငျြ့ရမှာပါ။ ဒီအဆငျ့ကို တောငျ့ခံနိုငျသူကတော့ ဆရာတဈဆူ ဖွဈမှာပါပဲ။ ဆရာ အဆငျ့ ကြှမျးကငျြမှုဟာ ဆရာအဆငျ့ လကေ့ငျြ့မှုကွောငျ့ပါ။ မှေးရာပါ မဟုတျပါဘူး။
၅. ဝဖေနျမှု ခကျြခွငျး ခံယူပါ
၁၉၆၀ Highschool Rock band လေး တဈခု ဘဝမှာကတညျးက Beatles ဟာ ဂြာမနီမှာ သှားရောကျ ပွီး လမျးဘေးတီးဝိုငျးတဈခုအနနေဲ့ ဖွဖြေျောခဲ့ပါတယျ။ ဘာမှ မရခဲ့ပါဘူး။ အသံတှကေလဲ ဆိုးရှားလှနျးခဲ့ ပါတယျ။ အဲဒီတော့ သူတို့ ဘာရခဲ့လဲ?? လကေ့ငျြ့မှုနဲ့ ဝဖေနျမှုတို့ပါ။ အဲဒါကပဲ Beatles ကို အပျေါကို တှနျးပို့ခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ဟာ ကားဂိုထောငျထဲမှာပဲ ကငျြ့ခဲ့တာ မဟုတျပါဘူး။ ခကျြခွငျးဝဖေနျနိုငျမယျ့ လူအုပျရှမှေ့ာ ကငျြ့ခဲ့တာပါ။ အဲဒီလိုနဲ့ တစတစ ပိုကောငျးလာပွီး ၁၉၆၄ မှာ နိုငျငံတကာအဆငျ့ကို ရောကျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ တီးဝိုငျးဟာ အကွိမျ ၁၂၀၀ ဖွဖြေျောခဲ့ပွီးပါပွီ။ ခုခတျေ တီးဝိုငျး အားလုံးလိုလိုဟာ အကွိမျ ၁၀၀၀ မဖွဖြေျောနိုငျပါဘူး။
၆. ကွာရှညျစှာ လလေ့ာပါ
အောငျမွငျနိုငျတဲ့ လူတျောတျောမြားမြားဟာ မြောသှားတဲ့ အခွအေနမှော ဆကျလကျ မလလေ့ာကွတော့ပါဘူး။ တဈခုခု အသဈအဆနျးကို တှကွေုံ့ရရငျ လူဟာ အဲဒီအရာကို လုပျရတာ ရှငျမွူးတကျကွှတတျပါတယျ။ ရိုးသှားတဲ့ အခြိနျကတြော့ ပငျြးသှားပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ဆကျလကျ မလလေ့ာတော့ပါဘူး။ သငျဟာ အရှမှေ့ာ မြောသှားတော့မယျဆိုတာကို သိရငျ ကိုယျ့ဘာသာ စိတျပွနျထိနျးနိုငျရပါမယျ။ သိနရေငျတော့ ထိနျးရ လှယျနမှောပါ။ အဲဒီ မြောတဲ့ အခြိနျ အဆုံးမှာ သငျ့ဘဝ တိုးတကျလာတာ ခံစားရမှာပါ။
– တတျကြှမျးပွီးသားလူတဈယောကျရဲ့ နညျးနာကို ခံယူပါ
– စှမျးရညျ၊ အလုပျ တဈခုခုကို အသေးစိတျ ခှဲခွမျးစိတျဖွာပွီးမှ အရေးကွီးတာတှကေို ရှေးခယျြလလေ့ာပါ
– အလုပျ နှဈခှ မလုပျပါနဲ့
– ထပျခါ ထပျခါ လုပျပါ
– ဝဖေနျမှု ခကျြခွငျး ခံယူပါ
– မပွီးဆုံးခငျ မြောမသှားပါစနေဲ့။ မပငျြးပါနဲ့
Previous: အိပ်ရေးပျက်သည့်ဒဏ်ကို ခံနိုင်စေမည့် နည်းလမ်းများ
Next: တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် Gym ကစားဖို့ သိရှိမှတ်သားစရာများ